အားလုံးဘတ်တဲ့ တီချမ်း: တီချမ်း နဲ့ မာလာဟင်း
ပြည်က ပြန်လာတုံးက ဝယ်လာတဲ့ ရှမ်းမောမြေ မာလာဟင်းအနှစ်ထုပ် တွေကို မစမ်းကြည့်ရသေးတာနဲ့ ဒီနေ့ တော့ လုပ်စားမယ် စိတ်ကူးပါတယ်။ မောင်ကလဲ ကြိုက်လို့ စားချင်တယ်ပြောနေတာ ကြာပြီလေ။ အရွက်စုံစုံ မဝယ်ဖြစ်သေးတာနဲ့ မချက်ကျွေးရသေးတာ။ နောက် အရင်တခါ တရုတ်ပြည် ယူနန်ဘက် (ကူမင်းသွားတုံးကလဲ) လမ်းဘေးမှာ ခဏခဏ ဝယ်စားဖြစ်တာ သူတို့ က ပိုတောင်မိုက်သေး။ အရွက်မျိုးစုံကို တုတ်နဲ့ ထိုးထားတာ၊ ကြိုက်တာရွေး ချက်ချင်းပြုတ်ပြီး ချက်ချင်းနယ်ပေးလိုက် မာလာ ဟင်းဖြစ်တာပဲ။ မြန်မာပြည်မှာတော့ ရွှေလီမှာ အစားများတယ် မာလာဟင်း ကိုကြိုက်တာနဲ့ပဲသွားသွား စားဖြစ်နေတာ နောက်ပိုင်းတော့ စားရတာ မတန်လို့ မစားကိုမစားတော့ဘူး။ ခုတော့ ကိုယ့်ဘာသာလဲ လုပ်တတ်ပြီ စားလို့ လဲ ကောင်းမှ ကောင်းဆိုတော့ ဈေးကြီးပေး စားစရာမလိုတော့ဘူးပေါ့။ ချစ်သူငယ်ချင်း ဘလောခ် ဘတ်သူတွေကိုလဲ မျှပေးချင်တာနဲ့ ရေးတာပါ။ အရင်ဆုံး ပါဝင်မယ့်ဟာတွေ ပြမယ်နော်။ အမှန်ကတော့ ကိုယ်လုပ်ရင် ကိုယ့်နည်းပါပဲ။ ကိုယ်ကြိုက်တာ ထည့်ပေါ့ ပါရမှာမို့လို့ မကြိုက်တဲ့ အသီးအရွက် ထည့်ရမယ် မရှိပါဘူးနော်။ တီကတော့ ကြိုက်တဲ့ အရွက်တွေအကုန်ထည့် ပစ်တာပဲ။ အဲ့တာကြောင့်လဲ လုပ်လိုက်တာ ဘယ်လောက်ဖြစ်သွားလဲ ဆိုတာ အောက်ပိုင်းမှာ ဆက်ရှု....
နောက်တော့ လှော်ကြိတ်ထောင်းထားတဲ့ ဝှားကျောဝ်း ခုန က ပြောတဲ့ ထုံတုံတုံ ကိုထည့်ပါတယ်။ ထမင်းစား ဇွန်း အတို ဇီးဘရား တံဆိပ် အမြီးလေးနဲ့ ကလော်ပြီးတော့ ထည့်ပါတယ်။ မောင်က “မာ” တဲ့ အရသာကိုသိပ်မကြိုက် ဘူးဆိုလို့ လျော့ထည့်ပါတယ်။ ပဲငံပြာရည် အကြည် ကလေးလေး တံဆိပ် နည်းနည် ပစ်လိုက်ပါတယ်။ ဆား အချိုမှုန့် မထည့်ပဲ သူ့အစား ဝက်မှုန့် ထည့်ပါတယ် (ခနော်တံဆိပ် ကြက်မှုန့် နဲ့တူတူပါပဲ သူက ဝက်လဲ လာတယ်) ထုံးစံအတိုင်း လင်တော်မောင်က ကြက်မစားတော့ ဝက်ပဲပေါ့။ အမှန်က နမ်းဆီ နည်းနည်းထည့်ရပါမယ်။ အိမ်မှာ က အသင့်မရှိဘူး သံလွင်ဆီပဲ ရှိတယ် အနံ့ မကြိုက်လို့ မထည့်တော့ဘူး။ တော်ကြာ ပျက်ကုန်မယ်။ တရုတ်နဲ့ အီတလီရောပြီးတော့။ ကဲ နယ်ပြီ.....
မောင် ပြောင်သွားပြီ ကိုယ်နည်းနည်း ကျန်နေတယ်။ ဟော.....မောင်ကော ကိုယ်ကော ပြောင်သွားပြီ။
နန်းညီ February 10, 2012 at 2:58 PM
(သေးတယ်ထင်လာလို့ လဲမလို့ကြံနေတဲ့ ၃၂ လက်မ LCD SHARP AQUOS) ဆိုတာပဲ မျက်စိထဲ ကွက်ကွက်ကြီးမြင်နေတယ်.. ကတောက်.. ကြွားထာ
Thank you from the bottom of the heart !!!
I'm looking for the easiest but delicious way to make "Marlar Hinn". Your cooking looks so tempting that I cannot wait till tomorrow.
As much as u allow,i'll comment .I appreciate most of your writing and cooking.Go on.....Tks
GOOd! want to taske them now!
သစ်သစ် February 10, 2012 at 3:53 PM
ဒီလောက် မဟားဒရားစားနေတာတောင် နေ.တိုင်းသံပုရာရည်လေးသောက်ရုံနဲ. ဆယ်ပေါင် ကျတယ် အံ.ထှာ
Yes, Yes, how can you loose ten pounds after eating all of that....
Evy February 10, 2012 at 4:57 PM
မာလာဟင်း စားချင်လာပြီဗျို့ တီချမ်း။ ရှင်က သံပုရာရည်တွေသောက်နေတာကိုး။ ပိန်သွားတယ်မှတ်တာ ဆေးတွေ့နေတာကိုး။ အဲဒါကိုတော့ အရမ်းစိတ်ဝင်စားတယ်။ သံပုရာရည်က ချဉ်ချဉ်လား ချိုချိုလား
ဆရာမရေ စာမကျေတာလဲ မပြောနဲ.လေ ဆရာမက တခါတလေ ကျောင်းကိုပစ်ထားတာ သင်ရင်လဲ ဒီသင်ခန်းစာကနေ ဟိုသင်ခန်းစာ ပြောင်းချင်ပြောင်းတာ အဲဒီတော. မီးတို.က မေ.ပြီပေါ.လို.
စံပယ်ပန်း February 10, 2012 at 9:10 PM
တီချမ်း စီဘောက်ဘယ်ရောက်သွားလဲ..။ တီချမ်းရေးတာနဲ့ ထိုင်းကိုအလည်လာချင်နေပြီနော်..။
အနော် ရှမ်းမုန့်ညင်းချဉ် ချင်တယ်..။ နောက် မန္တလေးမှာနေ့လည်ဘက်ရောင်းတဲ့ အချဉ်သုတ် မှောင်မှောင်ဆိုင်က မုန်လာဥဖြူနဲ့ မုန်လာဥနီ ချဉ်တယ်ချင်တယ်..။ တီချမ်း.. လင့်ရှိရင် ပေးပေးပါ..။ ဒါမှမဟုတ် တီချမ်းချဉ်ပြပါ ခညာ..။
မုန်လာဥခြောက်ကို တရုတ်လိုချဉ်ထားတာ တင်ဘူးလားဟင်
စားလိုက်ရင် ထုပ်ထုပ်လေးလေ ကြွပ်ဆတ်ကြီးလည်းမဟုတ်
mstint February 11, 2012 at 8:10 AM
မာလာဟင်းတော့ တီတင့်မချက်ဖူးသေးဘူး တီချမ်းရေ။
နည်းနိဿယလေးတွေ သေသေချာချာမှတ်သွားတယ် ကျေးဇူးနော်။
တီချမ်းချက်တာ သပ်သပ်ရပ်ရပ်လေးး)
ချစ်ကြည်အေး February 11, 2012 at 11:38 AM
Kyaw Hnin Se Lwin February 12, 2012 at 8:37 AM
Kyaw Hnin Se Lwin February 12, 2012 at 8:38 AM
san htun February 12, 2012 at 10:52 AM
မာလာဟင်းတခါမှ မချက်ဘူးပါ..စားကောင်းမဲ့ ပုံပဲ..
သက်ဝေ March 26, 2012 at 2:00 PM
ဒါပေမယ့် လုပ်ရမှာတွေက အများကြီးပဲ...း(
တီချမ်း March 26, 2012 at 3:50 PM
မခက်ပါဘူး သက်ဝေ ရဲ့ (မှတ်ချက် အဲ့နာမည်ကို မကြိုက်ပါ) မမသက်ပဲ ခေါ်မယ်
ကိုယ်ကြိုက်တာ စားချင်တာပဲ ထည့်လေ သူ့အတိုင်း ထည့်စရာမလိုဘူး
တီဆို အမြဲပဲ လုပ်ရင် လောဘ က မသတ်နိုင်တာကြောင့် ပန်းကန်နဲ့မပြီးပဲ ဇလုံ အဆင့်ရောက်တယ်
လူ ၁၀ ယောက် ကောင်းကောင်း စားရတယ်